Serivisy fanariana metaly China - Casting Minghe
Serivisy fanariana vy eto amin'ny Internet
Ny fanariana vy dia dingana iray izay ahosotra ao anaty rano ny metaly izay mahafeno fepetra takiana ary arotsaka ao anaty lasitra. Aorian'ny fampangatsiahana, fanamafisana ary fanadiovana dia azo ny casting miaraka amin'ny endrika, habe ary fampisehoana efa voafaritra mialoha. Satria saika niforona ny banga fanariana, dia mety hahatratra ny tanjon'ny fisorohana ny masinina na ny fanodinana kely, ny fihenan'ny vidiny ary ny fihenan'ny fotoana amin'ny lafiny iray. Casting dia iray amin'ireo dingana fototra amin'ny indostrian'ny orinasa mpamokatra milina maoderina.
Minghe ltd dia orinasa fanariana vy any Sina izay manana traikefa mihoatra ny 35 taona amin'ny famolavolana vokatra sy ny famokarana faritra indostrialy. Ny prototyping haingana sy ny famokarana goavana amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny faritra voafaritra dia avela ho azo tanterahina miaraka amin'ny fanampian'ny serivisy fanariana vy sy teknika fanamboarana. Ireo mpamolavola mahay dia mifampiresaka tanteraka amin'ny fonosana rindrambaiko marobe, afaka mitazona ny hafainganana sy ny kalitaon'ny vokatra. Ny famolavolana ny vokatra efa mandroso sy amin'ny antsipiriany dia hiantoka ny fametahana milina amin'ny Internet haingana.
Na ny sary na famolavolana vokatra fotsiny no ilainao, na Minghe dia afaka manome fahafaham-po ny filanao amin'ny vidin'ny fifaninanana, ny fahombiazana miavaka ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra.
Fa maninona no misafidy serivisy fanariana metaly China?
Ny lasitra vy dia manana tahan'ny fihenam-bidy haingana kokoa ary firafitra matevina kokoa amin'ny casting, izay azo hamafisina amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana, ary ny fananana mekanika dia 15% eo ho eo noho ny fanariana fasika.
Fanariana bobongolo vy, miorina ny kalitaon'ny fanariana, tsara kokoa ny hamafin'ny faritra noho ny fanariana fasika, ary ambany ny tahan'ny fandavana.
Ny fepetra miasa tsara, ny famokarana avo lenta, mora hohanin'ny mpiasa.
Nandritra ny 35 taona mahery, ny orinasa mpamokatra vy Minghe dia nanome serivisy fanariana vy manokana ho an'ny indostria sy karazana tetikasa. Ny fanamboarana bobongolo ao an-trano, ny fitsaboana hafanana ary ny serivisy fanariana marina dia mitondra traikefa sy kalitao amin'ny tetikasa rehetra.
Ny fahaizanay vokatra dia miainga amin'ny tetik'asa fanao amin'ny prototyping ka hatrany amin'ny tetikasa fiara lehibe, fiara fitateram-bahoaka, ary lalamby.
Fahafahana amin'ny serivisy fanariana vy
Amin'ny maha-iray amin'ireo serivisy mpamokatra haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha ao Shina, ny fahaiza-manao fanariana manaraka eto Minghe dia misy hanompoana ny filanao ampahany amin'ny fanariana vy, manomboka amin'ny prototyping haingana ka hatramin'ny faritra marina sy ny milina fanodinana fitaovana, hatramin'ny famokarana farany fampiasana.
Ny casting casting dia fizotry ny famokarana anaovana metaly an-idina na alefa anaty lasitra vy ..
Ny fandefasana vola dia manome ny endriny faratampony ho an'ny ampahany sarotra be vita amin'ny alloys safidy lehibe.
Ny fanariana fasika dia dingana iray amin'ny fampiasana ny fasika ho fitaovana voalohany hamolavolana vokatra metaly isan-karazany
Ny famoahana sombin-tsakafo very dia ny fampifangaroana ny paraffin savoka na ny maodelim-bovoka mitovy amin'ny haben'ny casting sy ny endriny ao amin'ny cluster modely.
Fanariana centrifugal raha ny axis rotation an'ny bobongolo dia miorina amin'ny fanjakana mitsangana dia antsoina hoe casting centrifugal mitsangana.
Ity fomba fanariana ity dia manana sakafo ara-tsakafo sy firafitra matevina, mora ny manipy casting be pitsiny matevina matevina
Ny famolavolana bobongolo maharitra dia manana fiainana lava sy fahombiazan'ny famokarana avo lenta, tsy vitan'ny hoe manana refy marina tsara sy malefaka amboniny
Vacuum Casting dia dingana fanariana vy izay alefa amin'ny vy, araraka ary hatao kristaly ao anaty efitrano fantsona
Ny serivisy Minghe Gravity Casting dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny famokarana faritra avo lenta sy lafo vidy.
Azonao atao ny misafidy karazana serivisy famaranana metaly vita amin'ny metaly aorian'ny fametahana milina amin'ny mpamokatra fanariana vy Minghe hanatsara ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny fahombiazan'ny ampahany amin'ny fanariana vy anao.
Fampiharana avy amin'ny MINGHE Metal Casting Services
Ny metaly fanariana vy dia manodidina anao, mety ho singa manan-danja amin'ny fiaranao izy ireo ary afaka manao asa lehibe amin'ny fitaovanao elektrika. Minghe dia mpamatsy fantsom-pahombiazana nahavita nanao fampiharana vy be dia be.
Ny tombony azo avy amin'ny serivisy fanariana vy Minghe
Ekipa mpamolavola vokatra vita sy voaofana no manavao ny teknolojia sy ny fitaovana farany
Mahavita mamantatra sy mamaha ny ankamaroan'ny olana mandritra ny dingan'ny famolavolana
Volavola CNC azo itokisana mba hahatratra ny takiana amin'ny faritra manokana ho an'ny indostria maro
Hamarino tsara fa ny dingana rehetra vita ao anatin'ny fandaharam-potoana sy hahatratra ny kalitao irina